Marilyn, baseball nyocha azụmahịa echiche — HunterThinks.com
Ozugbo ngwaahịa na-guzosie ike, anyị ga-emepụta a video banyere a baseball isiokwu ọ nyochara. Ihe Nlereanya gụnyere ihe dị mkpa game, a ahia, player development, gbara, ọnọdụ na a akpan akpan otu, na na ọnọdụ na-baseball. Videos ga-agbasaghị inwe gburugburu 3.5 nkeji ogologo, na ha ga-agbasaghị nyochaa naanị otu isiokwu. Marilyn na website ga-agụnye niile nke videos na-eme ka ọ dị mfe ịchọta vidiyo dabere na isiokwu, otu, player, ma ọ bụ ndị ọzọ ibiere na anyị mata dị ka bara uru.
Nhọrọ: na njedebe nke video, Marilyn ga nwere a na-ejere ọha mara ọkwa na-akwalite a ọrụ ebere, afọ ofufo ohere, ma ọ bụ nke na ọ bụ mmasị na. Anyị ga iwerekwa ndị a ọkwa.
Mgbasa ozi ga-n'ịwa kasị ego. Onye ọ bụla video ga-a “nkwado” ụlọ ọrụ logo. The nkwado ga-egosipụta n'oge ọtụtụ ndị video. The video ga-nwekwara a 10-30 abụọ advertisement maka nkwado. The YouTube page na website ga-ejikọta onye nkwado. N'ikpeazụ, na website ga-ọkọlọtọ mgbasa ozi na-enye ihe niile nke ọkaibe ezubere iche na o kwere omume na online mgbasa ozi.
Gbaziri a igwefoto. Rental ese foto dị mgbe ọ dị mkpa. N'oge anya-oge, ime otu profaịlụ: ebe ha bụ ndị na, ebe ha na-aga, spring ọzụzụ ozi, etc. Mee videos banyere isi mgbanwe. Ekwela amalite website, dị nnọọ biputere videos na YouTube. N'ihi na Chicago-metụtara videos, o nwere ike ịbụ na o kwere omume chọta a obodo nkwado nke na-adịghị akwụ ụgwọ ọma ma ọ ga-esi revenue bọl inyefe.
Gaje Ịbụ isiokwu
Ndị mmadụ na-achọ okwu a
Ndị mmadụ ga-zipu isiokwu a
Ma ugbu a ozi ọma ma ọ bụ ihe ndị mmadụ ga-ele nke a ogologo oge. Nwere ike ụfọdụ videos ịbụ ma?
Olee otú videos, karịsịa featuring a baseball ọkpụkpọ. e.g., Olee itu a curveball-na Roger Clemens.
Kitschy stof: kacha mma na-ekpo ọkụ nkịta
Pictures of Marilyn eri na-ekpo ọkụ nkịta
Charity ndisịn idem
Ajụjụ Ọnụ, karịsịa ọhụrụ Player na ìgwè ka Fans pụrụ ịmata ha
New ámá egwuregwu profaịlụ
Ndi a zoo / oru ngo na-ekiri ha na-eji Google modeler na ihe nlereanya niile nke stadiums
On a ụbọchị otu narị afọ gara aga.
World Baseball Classic na March
Hall of Fame itinye n'ọkwa
Fans booing ha onwe ha otu
Marilyn kpọrọ asị asị na-efegharị efegharị
Web mba / email
Makeup na ntutu isi
Tinye studio ma ọ bụ igwefoto Marilyn na ulo ka ọ nwere ike dee ihe ọ bụla oge ọ chọrọ.
Ọ dị mkpa ime ka videos na ndị mmadụ ga na-ekiri maka afọ. A video banyere baseball atụmatụ ga-emesị nweta ọzọ echiche karịa a video banyere a playoff game. The ogologo oge ego bụ na-eme videos na-enweta abụọ-nde echiche. N'akụkụ aka nke ọzọ, site mgbe nile na-amị videos banyere-eme ugbu a, anyị ga-ewu a mgbe nile na-ege ntị. The mgbe na-ege ntị ga-akpaghị aka n'ịwa ọtụtụ puku echiche ọ bụla video.
Marilyn eche Rachel Maddow bụ “nnọọ ihe ọmụma ma kpam kpam un-agwụ ike na un-mkpọchi.”
Otu Mata echiche Tags Charity, Google post igodo